यस्ता छन ईटहरी स्थित दश तल्ले सेन्ट्रल प्लाजाका दश आकर्षण (तस्विरहरू सहित) - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०६, २०७६ समय: १४:२२:०४
इटहरी । सुनसरीको इटहरी स्थित मुख्य चौकमा रहेको सेन्ट्रल प्लाजा अहिले धेरैका लागि आकर्षक किनमेलको गनतब्य बनिरहेको छ । दश तल्ले सुविधासम्पन्न .प्लाजामा ग्राहकहरूको समेत दिन प्रतिदिन आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । दश तल्ले प्लाजाका दश आकर्षण यस्ता रहेका छन् ।
१. होटेल बरण्डा
सेन्टर प्लाजामा रहेको होटेल बरण्डा यसको एउटा आकर्षण हो । १५ करोड भन्दा बढी लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको सो होटेलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवा सुविधाहरू रहेका छन् । होटेलमा ३० वटा लक्जरी तथा ३ वटा स्वीट रुमहरू रहेका छन् । त्यसैसरि ग्राहकको आवश्यकलाई ध्यानमा राखेर होटेलले समय अनुकूल सेवा सुविधामा समेत वृद्धि गरिरहेको छ । थ्री स्टार होटेल सरहको सेवा सुविधा समेत यस होटलमा रहेको छ ।
२. सिने फ्लेक्स
सेन्टर प्लाजाको अर्को आकर्षण भनेको सिने फ्लेक्स पनि हो । सुविधा सम्पन्न यस हलमा दैनिक नेपाली, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी फिल्महरू प्रदर्शन हुने गर्दछन् । प्लाजा भित्र रहेको यस सिनेमा हलमा दशर्कहरुको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हलका आउने दर्शकहरू हलको सुविधाबाट मोहित हुने गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
३. निल डेविड सलून
सेन्टर प्लाजाकाे दाेस्राे तलामा निल डेविड सलून सेन्टर प्लाजाकाे एक अकर्षणकाे रूपमा रहेकाे छ । प्लाजा भित्र रहेको सैलुन विशेष प्रकारको छ । विभिन्न सुविधा रहेको सैलुनमा सौन्दर्यका पारखीहरूको बढी आकर्षण रहेको छ ।
४. ग्राउण्ड क्याफे :
सेन्टर प्लाजामा रहेको ग्राउण्ड क्याफे यहाँको एउटा आकर्षण हो । विभिन्न सुविधि रहेको क्याफेमा दैनिक जसो नै भिड लागेको हुन्छ । क्याफेमा रमाउने धेरैको रोजाइमा प्लाजामा रहेको क्याफे पर्दछ ।
५. सनराइज बैंक
सनराइज बैंकको इटहरी शाखा सेन्टर प्लाजामा नै रहेको छ । इटहरी र आसपासमा रहेका ग्राहकको सुविधाको लागि प्लाजा खोलिएको यो बैङ्क पनि एउटा आकर्षणको रूपमा नै रहेको छ । आर्थिक कारोबार गर्नेहरूको भिडभाड नै हुने यो बैङ्कले प्लाजाको रौनकता थपेको छ ।
६. युनिक स्विट्स
सेन्टर प्लाजाको अर्को आकर्षण युनिक स्विट्स पनि हो । यहाँका पसलहरूमा पाइने युनिक स्विट्सहरूले ग्राहकको मन तान्ने गरेको छ । मिठाईका पारखीहरूले सेन्टर प्लाजालाई आफ्नो गन्तव्य बनाउने गरेको पाइन्छ ।
७. स्काई शप
स्काई शपले पनि सेन्टर प्लाजाको आकर्षणलाई बढाएको छ । यो भवनमा रहेको स्काइ शपमा विभिन्न सुविधाहरू रहेका छन् । आफूलाई तन्दुरुस्त राख्ने र सुन्दर देखिन चहानेहरूको यहाँ बाक्लै उपस्थिति देख्न सकिन्छ ।
८. मेलान्ज स्टोर
सेन्टर प्लाजा स्थित मेलान्ज स्टोर एक प्रमुख अार्षणकाे रूपमा रहेकाे छ । सस्ताे तथा स्तरिय मल्टिब्रान्डका लत्ता कपडा तथा फेसनका सामानहरू पाइनु नै मेलान्जकाे बिशेषता हाे । ग्राहकको बढी रुचि हुने यस्ता सामाग्रीले दैनिक प्लाजामा भिडभाड हुने गरेको छ ।
९. अन्डरग्राउन्ड पार्किङ
अन्डरग्राउन्ड पार्किङ पनि एउटा विशेषताको रूपमा रहेको छ । इटहरी क्षेत्रमा पार्किङको समस्या भइरहेको मा प्लाजाको आफ्नौ अन्डरग्राउन्ड पार्किङले पनि आकर्षण बढाएको छ । प्लाजामा आउने ग्राहकाले पार्किङको समस्या नभोग्नु पनि इटहरी बासिएका लागि ठुलो खुसीको विषय हो ।
लिफ्टले पनि प्लाजाको आकर्षणलाई बढाएको छ । ग्राहकको सुविधाको लागि प्रयोगमा ल्याइएको लिफ्टको प्रयोग गर्ने सङ्ख्या धेरै रहेको छ ।धेरै सुविधामा रमाउन मन पराउने नेपालीका लागि हिन्नु नपर्ने सुविधा आकर्षक नहुने कुरै भएनन् ।
यस प्लाजामा यी लगायत धेरै आकर्षणहरू रहेका छन् । इटहरीको केन्द्रमा रहेको यो प्लाजाबाट इटहरी तथा आसपासका क्षेत्रहरुलाई प्रष्टरूपमा अवलोकन गर्न समेत सकिन्छ ।